I-China Die inqubo yokuphonsa Umkhiqizi nomhlinzeki | I-Mestech
Inqubo die ekubunjweni inqubo lapho i-zinc, ithusi, i-aluminium, i-magnesium, i-lead, i-tin ne-lead tin alloys kanye nama-alloys ayo ancibilika ekushiseni okuphezulu futhi afakwa emgodini wesikhunta, bese epholile ngaphansi kwengcindezi ukuthola izingxenye.
Izinga lokushisa elisebenza ngensimbi engafakwa ekubunjweni liphansi kakhulu kunelokulingisa i-iron, futhi imishini yokuthola isisekelo ehambisanayo nezidingo zenqubo zilula, futhi zincane. Ukukhiqizwa kokukhishwa kwe-die kungathola ikhwalithi enhle kakhulu yendawo nokunemba okuyisilinganiso, ikakhulukazi kufanelekile ekukhiqizeni okujwayelekile okukhulu kwezingxenye ezincane naphakathi, okunikeza ukusekelwa okuhle kwengxenye ye-elekthronikhi yesimanje, imishini kagesi, izimoto, amadivayisi wezokwelapha, izinsimbi kanye ne-kithen amathuluzi. Ama-alloys ensimbi ahlukene anezinhlamvu ezihluke kakhulu kunqubo yokufa. Isigaba sabo esincane kanye nokusalungiswa kwabo okuncane kwehlukile, ukushisa kwamaphuzu okuncibilika kuhlukile, ukuqeda komphezulu kwehlukile, ngakho-ke kungcono ukufaka iqembu lethu lonjiniyela ekuqaleni kwenqubo yokuklama ukusebenzisa ubuchwepheshe bethu ngomklamo wokwenza.
Kunezici ezinhlanu eziyinhloko enqubeni yensimbi yokufa:
1.Die ekubunjweni impahla;
Izinhlobo ze-Die Process casting;
Umshini 3.Die ekubunjweni;
4.Die ekubunjweni isikhunta;
5.Post Icubungula futhi Finishing Izingxenye Die Ekubunjweni
Inqubo yokufa ye-Metal dieinqubo yokuhlanganisa ingcindezi, isivinini nesikhathi ngokusebenzisa izinto ezintathu zomshini, isikhunta kanye ne-alloy. Ukusebenza kwensimbi okushisayo, ukuba khona kwengcindezi yisici esiyinhloko senqubo yokufa ehlukile kwezinye izindlela zokulingisa. Ingcindezi thusi kuyindlela ekhethekile yokusakaza enokusikwa okuncane futhi akukho, okuthuthuke ngokushesha kubuchwepheshe besimanje bokucubungula izinsimbi. Kuyinqubo yokugcwalisa isikhunta ngensimbi encibilikisiwe ngaphansi kwengcindezi ephezulu nejubane elikhulu, bese wenza ukusakazwa nge-crystallization nokuqina ngaphansi kwengcindezi ephezulu. Ingcindezi ephezulu nesivinini esikhulu yizici eziyinhloko zokuphonsa okufa. Ingcindezi esetshenziswa kakhulu amashumi ama-megapascals, isivinini sokugcwalisa (isivinini sesango langaphakathi) cishe siyi-16-80m / s, futhi isikhathi sokugcwaliswa kuketshezi lwensimbi emgodini wesikhunta sifushane kakhulu, cishe ngama-0.01-0.2s. I-Metal die casting iyinqubo yokusakaza yensimbi ebonakala ngokuphoqa insimbi encibilikisiwe ngaphansi kwengcindezi ephezulu emgodini wesikhunta. Umgogodla wesikhunta nomgogodla wenziwa kusetshenziswa insimbi eqine efile eyenziwe ngomumo futhi isebenza ngokufana nesikhunta somjovo ngesikhathi senqubo. Ngokuya ngohlobo lwensimbi ephonswayo, kusetshenziswa umshini wegumbi elishisayo noma elibandayo.
I-MESTECH inikeza izingxenye zokufa zokufa ze-zinc alloy, i-aluminium alloy ne-magnesium alloy. Ngoba lezi zinto ezintathu yizinto ezisetshenziswa kakhulu ekuphonseni ingxubevange yezinto okwamanje.
Izici ze-Zinc alloy:
--- Amandla aphezulu nobulukhuni
--- Ukuqhuba kahle kagesi
--- Ukuqhuba okuphezulu kokushisa
--- Okubizayo okusetshenzisiwe
--- Ukunemba okuphezulu kokuqina nokuzinza
--- Amandla amancane odonga amancane
--- Amandla efomu elibandayo, elehlisa ukujoyina
--- Izici zokuqeda ikhwalithi ephezulu
--- Ukumelana nokugqwala okuvelele - Ukuvuselelwa kabusha okugcwele
Izici ze-2.Aluminium Alloy:
--- Ukushisa okuphezulu kokusebenza
--- Ukumelana nokugqwala okuvelele
--- Amandla amahle kakhulu nobulukhuni
--- Ukuqina okuhle namandla-kuya-isisindo isilinganiso
--- Izakhiwo zokuvikela i-EMI ne-RFI ezinhle kakhulu
--- Ukuqhuba kahle okushisayo
--- Ukuqhuba okuphezulu kagesi
--- Izici ezinhle zokuqeda
Ukuvuselelwa kabusha okugcwele
Izici ze-Magnesium Alloy:
--- Ukuqhuba okuphezulu; kagesi, futhi ezishisayo
--- Imelana namazinga okushisa aphezulu okusebenza
--- Ukumelana nokugqwala kwemvelo okuhle
1 Inqubo Yokulingisa Okushisayo
I-Hot-chamber die casting, kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi yi-gooseneck casting, ithandwa kakhulu kulezi zinqubo ezimbili zokufa. Kule nqubo, ikamelo lesilinda lomshini wokujova ligxiliswe ngokuphelele kubhavu wensimbi oncibilikisiwe. Uhlelo lokuphakelwa kwensimbi lwe-gooseneck ludonsela insimbi encibilikisiwe emgodini wokufa.
Ngenkathi ukucwiliswa ngqo kubhavu oncibilikisiwe kuvumela umjovo wesikhunta osheshayo futhi olula, kubuye kubangele ukwanda kokuthamba. Ngenxa yaleli qiniso, inqubo yokulingisa ekamelweni elishisayo ilungele kakhulu izinhlelo zokusebenza ezisebenzisa izinsimbi ezinamaphuzu ancibilika aphansi kanye noketshezi oluphezulu. Izinsimbi ezinhle zenqubo yokulingisa ekamelweni elishisayo zifaka phakathi ukuhola, i-magnesium, i-zinc nethusi.
2 Inqubo Ye-Cold-Chamber Die Casting
Inqubo ebandayo yegumbi lokufa ifana kakhulu nekamelo elishisayo lokufa. Ngomklamo ogxile ekunciphiseni ukugqwala komshini kunokusebenza kahle kokukhiqiza, insimbi encibilikisiwe ifakwa ngokuzenzakalela- noma ifakwa ngesandla ohlelweni lokujova. Lokhu kususa isidingo sokuthi indlela yomjovo icwiliswe kubhavu wensimbi oncibilikisiwe.
Kuzinhlelo zokusebenza ezonakalisayo kakhulu ekwakhiweni kokucwiliswa kwe-hot-chamber die casting, inqubo yegumbi elibandayo ingaba enye indlela enhle kakhulu. Lezi zicelo zifaka ukusakazwa kwezinsimbi ezinamazinga okushisa ancibilika kakhulu, njenge-aluminium ne-aluminium alloys.
3 Inqubo Yokuphonsa Ingcindezi Ephansi
Ukuphonsa phansi okuphansi kwengcindezi kuyinqubo efaneleke kakhulu kuzinto ze-aluminium ezi-symmetric ezungeze i-axis yokujikeleza. Amasondo ezimoto, ngokwesibonelo, ajwayele ukwenziwa ngokusakazwa kocindezelo oluphansi. Kulolu hlobo lwenqubo, isikhunta sime sibheke ngenhla kubhavu wensimbi oncibilikisiwe futhi sixhunywe ngepayipi elikhuphuka. Lapho igumbi linengcindezi (imvamisa liphakathi kuka-20 no-100kPa), insimbi idonswa iye phezulu ifakwa kusikhunta. Ukususwa kwabahlinzeki kusuka kulolu hlobo lwenqubo yokuphonsa kufa kuletha isivuno esiphakeme.
4 Inqubo Yokuphonsa Ukufa
Umshini ingcindezi ekubunjweni (VPC) inqubo kuqhathaniswa entsha die ekubunjweni eletha amandla ngcono kanye porosity sakugcina. Le nqubo ifana nokuphonsa okuphansi kwengcindezi, ngaphandle kwezindawo zokubunjelwa kokufa nensimbi yensimbi encibilikisiwe. Igumbi lesilinda lingaba i-vacuum, ephoqa insimbi encibilikisiwe emgodini wesikhunta. Lo mklamo unciphisa uthuthuva futhi unciphisa inani lokufakwa kwegesi. Umshini die ekubunjweni kunenzuzo ikakhulukazi izicelo eyenzelwe ukwelashwa post-ekubunjweni ukushisa.
5 Inqubo Yokufaka I-Squeeze Die Casting
Shutheka ukusakaza kudalwe njengesixazululo esisebenzisekayo sokusakaza izinsimbi nama-alloys ane-fluidity ephansi. Kule nqubo, insimbi encibilikisiwe igcwalisa idayivu evulekile, bese iyakhama ivalwe, kuphoqelele insimbi ezingxenyeni ezifihliwe zokubumba. Inqubo yokukhipha i-squeeze iletha imikhiqizo eminyene ngokweqile futhi inqubo ehambisanayo ekwelapheni ukushisa okulandelayo. Inqubo ivame ukuhlotshaniswa ne-aluminium encibilikisiwe, futhi isetshenziswa kuzinhlelo zokusebenza ezifuna ukuqiniswa kwe-fiber.
6 Inqubo Yokulingisa eyi-Semi-Solid Die
Ukusakazwa oku-semi-solid die, kwesinye isikhathi okubizwa ngeT Thiofoforming, kungenye inqubo eletha i-porosity encane kanye nobukhulu obukhulu. Umshini usika okokusebenza kube ama-slugs amancane, bese uyashisa. Lapho insimbi isifinyelele ekushintsheni kwesigaba phakathi kokuqina noketshezi, okuholela ekuthambekeni okuncane, umkhono wokudubula uyiphoqelela embotsheni yesikhunta, lapho iqina khona. Inzuzo yalokhu ukucacisa okuthuthukisiwe. Izinsimbi ezingenayo i-ferrous ezifana ne-magnesium alloy ne-aluminium alloy zivame ukusetshenziswa nenqubo yokulingisa okuqinile.
7.Izinhlobo ze-Die Casting Process
Zonke izinhlobo zenqubo yokufa zenzelwe ngenhloso efanayo engqondweni-phonsa isikhunta usebenzisa insimbi encibilikisiwe. Ngokuya ngohlobo lwensimbi encibilikisiwe, ingxenye yejiyometri nosayizi wengxenye, izinqubo ezahlukahlukene zokuphonsa izidumbu zingaletha imiphumela ephezulu kunezinye izindlela. Izinhlobo ezimbili eziyinhloko zokuphonsa izinqubo zokufa ziyikamelo elishisayo kanye negumbi elibandayo. Ukuhluka kulezi zinhlobo ezimbili zokusakaza okufayo kufaka:
Low-ingcindezi die ekubunjweni
Umshini die ekubunjweni
Cindezela u-die casting
Semi-solid die asakazwe
1 Hot ingcindezi ikamelo die ekubunjweni umshini
Ngokuya ngesakhiwo nokuhlelwa kwekamelo, lingahlukaniswa libe amafomu avundlile naqondile. I-crucible yensimbi encibilikisiwe inamathiselwe emshinini ngekamelo elishisayo lokucindezela, futhi indlela ye-piston yengcindezi yensimbi ye-hydraulic engena kwisikhunta ifakiwe ku-crucible. Amanye ama-casters egumbini lokushisa elishisayo asebenzisa umoya onomfutho ukujova ngqo ingcindezi yensimbi ye-hydraulic kwisikhunta ngaphandle kwendlela ye-piston.
Hot ekamelweni die umshini ekubunjweni
Igumbi lokushisa elishisayo lokufa umshini wokuphonsa usetshenziselwa ikakhulukazi i-die-casting alloy enephuzu eliphansi lokuncibilika, njenge-zinc, i-Magnesium ne-tin.
2 Cold ingcindezi ikamelo die ekubunjweni umshini
Ukuncibilikisa insimbi ngaphandle komshini bese ufaka insimbi engamanzi egumbini lokuminyanisa ngesipuni ingahlukaniswa ngomshini obandayo opholile futhi umshini wokubanda ovundlile ufe umshini wokusakaza ngokuya ngokunyakaza kwepiston yokuminyanisa.
Insimbi ketshezi iyasuswa esithandweni somlilo esibheke phezulu esibandayo somshini wokulingisa bese ithelwa egumbini lokucindezelwa. Insimbi icindezelwa ngesifutho ku-isikhunta yi-compression piston, kuthi insimbi esalayo iphume ngenye i-piston.
Igumbi Cold die umshini ekubunjweni
Ikamelo elibandayo elibandayo lokufa umshini wokuphonsa liyafana nelime mpo, kepha ukunyakaza kwe-piston kuvundlile. Imishini eminingi yesimanjemanje yokufa iyavundla. Imishini yokuphonsa imishini ebandayo ingafa-isakaza izinsimbi zokuncibilika okuphezulu noma izinsimbi ezine-oxidized kalula, njenge-aluminium, ama-alloys ethusi, njll.
Umshini 3.Die ekubunjweni.
Umshini wokuphonsa u-die usetshenziselwa umshini wokuphonsa ingcindezi. Kubandakanya izinhlobo ezimbili ezishisayo ngokucindezela ikamelo lokufa umshini wokuphonsa kanye nomshini obandayo wokucindezela umshini wokufa. Igumbi elibandayo lokucindezela umshini wokulingisa uhlukaniswe izinhlobo ezimbili: iqonde futhi ivundlile. Insimbi encibilikisiwe ifakwa kwisikhunta ngomshini wokuphonsa phansi ngaphansi kwesenzo sengcindezi sokupholisa nokwakha, futhi ukusakazwa kwensimbi okuqinile kungatholwa ngemuva kokuvulwa kwesikhunta.
4.Die ekubunjweni isikhunta
Ngo isikhunta ahlukahlukene, izimo zokusebenza die die ekubunjweni die kukhona kunalokho nokhahlo. Ukufakwa kwe-die ukwenza insimbi encibilikisiwe igcwele isikhunta umgogodla ngaphansi kwengcindezi ephezulu nesivinini esikhulu, futhi uxhumane nensimbi eshisayo kaningi phakathi nenqubo yokusebenza. Ngakho-ke, kufa isikhunta ekubunjweni kuyadingeka ukuze kube nokushisa okuphezulu kokukhathala ukumelana, ukuqhuba okushisayo nokugqoka ukumelana, ukumelana nokugqwala, ukuqina komthelela, ubulukhuni obomvu, ukudiliza okuhle nokunye. Ngakho-ke, ubuchwepheshe ukwelashwa ebusweni die die ekubunjweni die kudinga ubuchwepheshe obuphezulu.
Sinikela ngezinsizakalo eziningi zokucubungula nokuqedela izingxenye zokufa ezivela kozakwethu abakhethiwe:
CNC machining - mpo, enezingqimba, turning, 5-eksisi
I-EMI - I-RFI Shielding
Plating - chrome, ithusi, zinc, nickel, ithini, igolide
Ukwenza i-Anodizing, Ukugqoka kagesi, ukuChromating / Ukungashintshi
Ukwelashwa Kokushisa, Ukudlula, Ukugoqa
Inqubo yobuciko engaphakathi endlini
I-Light Mechanical Assembly, kufaka phakathi ukufakwa kwe-stud ne-helicoil, i-O-ring, i-gasket
Laser Cutting futhi eqopha
Ukumboza kagesi nokuhlolwa kwesilika
Die-ekubunjweni ingxenye machining
Langaphambilini Isibonelo sepulasitiki
Olandelayo: Die izingxenye ekubunjweni